Walaaca Qaadhaan-bixiyeyaasha Ee Dib-u-dhacyada Doorashooyinka, Qancinta Xukuumadda iyo Guurtida Oo Loo Gudbiyey Muddo-kordhin | Berberanews.com
Home WARARKA Walaaca Qaadhaan-bixiyeyaasha Ee Dib-u-dhacyada Doorashooyinka, Qancinta Xukuumadda iyo Guurtida Oo Loo Gudbiyey...
Walaaca Qaadhaan-bixiyeyaasha Ee Dib-u-dhacyada Doorashooyinka, Qancinta Xukuumadda iyo Guurtida Oo Loo Gudbiyey Muddo-kordhin
(Berbera news) Qaadhaan-bixiyeyaasha Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka, ayaa weli walaac xooggan ka qaba dib-u-dhacyada caadada u noqday xilliga loo qabto qabsoomidda doorashooyinka mid Madaxtooyo, mid Baarlamaan iyo mid Gole deegaan-ba, waxaanay Xukuumadda Somaliland sheegtay inay walaacaas ka qancisay Waddamada taageera doorashada, isla markaana isla qaateen dhismaha Gole wada-shaqayneed oo ka wada hawlgeli doona hirgelinta in doorashoyinku ku qabsoomaan wakhtiga cusub ee loo cayimay dhawaan oo shalay ahaan la filayo in Golaha Guurtida loo gudbiyey.
Wasiir Ku-xigeenka Madaxtooyada Somaliland Axmed Xaashi Cabdi oo ka soo laabtay magaalada Nairobi oo ay isaga iyo Masuuliyeen kale kulammo kula yeesheen dhammaadka toddobaadkii tegay Wakiillada Qaadhaan-bixiyeyaasha doorashooyinka Somaliland ka caawiya ee fadhigoodu yahay Caasimadda Kenya ee Nairobi, ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, isla markaana faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka wadahadleen Wakiilladaas iyo waxa ay isla-qaateen-ba.
“Waxaannu ka wadahadalnay arrimaha doorashooyinka, sidaad ka war-qabtaan waddamada innaga caawiya doorashooyinka iyo Deeqaha caalamiga ahiba, waxay had iyo jeer daneeyaan qabsoomidda doorashooyinka, taasoo ay dawladduna la wadaagto in doorashooyin la qabto oo dawlad si dimuquraaddi ah lagu soo doortay ay timaaddo Somaliland. Sababta oo ah, waxaynu dheernahay waddamo badan oo innagu xeeran doorashooyinka oo aynu Somaliland ahaan magac ku yeelannay. Markaa, waxay walaac ka muujiyeen dib-u-dhacyadii hore innoo soo maray, tan immika iyo muddada cusub ee la qabtay inay doorasho ku qabsoomayso.” Sidaa ayuu yidhi Wasiir Ku-xigeenka Madaxtooyadu.
Axmed Xaashi Cabdi oo sii watay hadalkiisa, waxa uu intaas ku ladhay; “Markaannu aad u wadahadalnay waxaannu ku qancinnay dawladda inay ka go’an tahay inay doorasho dhacdo oo wakhtigaa ay marka hore-ba Gogosha ugu fidisay saddexda Xisbi Qaran ee wakhtiga ay ku heshiiyeen ka go’an tahay dawladda inay doorashada Madaxtooyadu qabsoonto. Ciddii ay khusayso ee Golaha Guurtidana Warqadda loo gudbinayo oo aan filayo in Maantaba (Shalay) loo gudbiyey Golaha Guurtida (Dalabka Muddo-kordhinta iyo dib-u-dhigista doorashada Madaxtooyad).”
Waxa uu Axmed Xaashi sheegay inay Xukuumaddu Guurtida kala hadashay tixgelinta wakhtiga doorashooyinka lo cayimay, waxaanu yidhi; “Xukuumaddu way ka hawlgashay inay kala hadasho Shir-guddoonka, iyaga oo iska leh Golaha Guurtidu cayimaadda wakhtiga la qabanayo doorashooyinka, haddana waxay Xukuumaddu ka hawlgashay siday ugu qancin lahayd inay Guurtidu tix-geliyaan go’aanka ay wada gaadheen saddexda Xisbi iyo Xukuumaddu-ba. Waannu u sheegnay waddamadaas inay taasi naga go’an tahay, wixii Dhaqaale dawladda ku xidhnaa ay bixisay, waxaas oo dhamina ay caddaynayaan sida ay Xukuumadda Somaliland uga go’an tahay inay doorashadu qabsoonto waqtigaa loo cayimay, iyaguna way nala qaateen markii dambe.”
“Waxaanannu go’aan ku wada qaadannay in laga wada shaqeeyo muddadaa la qabtay sidii ay doorasho uga dhici lahayd Somaliland. Haddaba, si ay taasi u suurtagasho waxaannu isla qaadannay; in la sameeyo Gole wada-shaqayneed oo ka kooban Qaadhaan-bixiyeyaasha, Daneeyayaasha dimuquraadiyadda, Xukuumadda, Saddexda Xisbi Qaran, Guddiga doorashooyinka iyo Baarlamaankuba ay ku jiraan, meelna looga soo wada jeesto qabsoomidda doorashada.
Previous articleTirada Safarrada Gaarka Ah Ee Madaxweyne Siilaanyo Intii Uu Xilka Hayey Iyo Barbar-Dhigga Marxuum Cigaal Iyo Rayaale
Next articleBerbera: Xuquuqdii Shaqaalaha Dekada Oo Ay Xukumadu Kala Badh Lunsatay